कृति आजाद बिरोध प्रदर्शनमा शंकरदेव ने बि संघ र प्रहरी बिच झडप::kamananews
१ जेष्ट २०७५ काठमाडौँ कृति आजाद को नेपाल प्रतिको नजर विरुद्ध शंकर देव क्याम्पसमा पुत्ला दहन भएको छ । शंकरदेव ने बि संघ द्वारा गरीएको बिरोध कार्यक्रममा बृहत भेलाले नालायक सरकार राजिनामा दे, सिमा सुरक्षा कायम गर, भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर, जस्ता नारा लगाएका थिए ।
बिरोध कार्यक्रम शंकर देव क्याम्पस बाटशुरु भएको जुलुस पुतलीसडक परिक्रमा गरी कोणसभा परिणत भएको थियो ।
कोण सभालाइ ने बि संघ नेताहरु अमृत वोस्ती , नवीन पौडेल , अमृत जुङ कार्की , टीका भण्डारी , दिपक ओझा , विवेक लामा , सुसान्त बस्नेत , समीर बस्नेत आदिले कोणलाइ सम्बोधन गरेका थिए ।
कोणसभालाई लाइ सम्बोधन गर्दै अमृत वोस्तीले कामना न्युजलाइ बताउदै,वास्तवमा भन्ने हो भने अोलीजी कहिल्यै राष्ट्रवादी थिएनन् । उनी केवल एमालेका अध्यक्ष थिए। उनको उदेश्य जसरीपनि पाटीलाई जिताउने थियो।
त्यसको लागि उनले अवलम्बन गर्नुपर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन जुनसुकै रणनीति तयार पार्न र कार्यन्वयन गर्न पछि परेनन्। भारतको हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्तिले निराश र पिडित अाम नेपालीहरुमा एक प्रकारको अाक्रोश सधै रहने गरेको छ।
भारतीय नाकाबन्दीले जन अाक्रोशको पारो उचाइमा थियो। अाम नागरीकको मनोभावना राम्ररी बुझेका उनले जनताको बोलीमा लय मिलाइदिए ।
भारतलाई अोठे भट्टेशराप गरेर सत्ताको रोटी सेक्ने नेपाली कम्युनिस्टहरूको पुरानै रणनीतिको प्रयोग गर्न सफल भए। राष्ट्रवादको चर्को नारा त केवल सत्ता प्राप्तिको सिंढी मात्र थियो जो अाज प्रमाणित भएको छ। चुनाव जित्न रणनीतिको प्रयोग गर्नु गलत होईन। तर उनले जनताको सच्चा राष्ट्रभक्तिको भावनासँग खेलवाड गरे।
धेरैलाई उनिप्रति ठूलो विस्वास र भरोसा थियो तर अाज उनिहरु अाफुले धोका पाएको अनुभुति गरेकाछन। हैन द्वैध चरित्रको पनि हद हुन्छ नि। यिनले त सीमा नै नाघे।कतिसम्म मूर्ख बनाउन सकेको? निवाचन अघि सिमानामा अग्लो पर्खाल लाउनु पर्छ भन्थे, अहिले खुले-अाम सीमा मिच्दा चुं गर्दैनन्।
चुनाब अघि कोशी ब्यारेजको साँचो खोसेर ल्याउँछु भन्थे, अहिले पानी जहाजको ललिपप देखाएर उच्च बाँध निर्माण गर्ने प्रपञ्च रच्दैछन। चुनाब अघि देशका सबै पुर्वाधार अाफै बनाइनुपर्छ हामी बनउछम भन्थे, अाज विकासकालागि छिमेकीको सहयोग खोजेको छु भन्दैछन्‌। २५ वर्ष अघि अान्द्रा भुँडी निस्कनेगरि बल लगाएर रोकेको अरुण तेस्रो, अाज प‌र्भुका महान हातबाट शिलान्यास गर्दै छन। जय राष्ट्रवाद !!!!!